Waxaan haysanaa 3 sano si aan uga fogaano aafada cimilada | Saadaasha Shabakadda
Sanadihii la soo dhaafay, diiwaanka diirimaadka ayaa si jaban loo jabiyaa bil kasta, taas oo, lagu daro dhacdooyinka saadaasha hawada ee sii kordheysa, taasoo horseedeysa aadanaha si ay u weydiiyaan, ugu yaraan daruuri, maxaad ku sameyneysaa meeraha.
Ficil kasta fal celintiisa ayuu leeyahay. Waxay ahayd in la fisho in, goor dhow ama goor dambe, gurigeenna, Dhulka, ay bilaabmi doonaan waxyaabo aynaan xakamayn karin. Hal koox ayaa qortay warqad furan oo ay ku sharaxeyso taas waxaan heysanaa seddex sano oo kaliya si aan uga fogaano saameynta ugu xun ee cimilada.
Warqadan, oo ay qoreen lix saynisyahano iyo diblomaasiyiin caan ah, oo ay kujiraan cilmibaare iyo madaxii hore ee UN-ka ee deegaanka, Christiana Figueres, iyo fiisigist Stefan Rahmstorf, ayaa sharraxaysa seddexdii sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa ugu kulul adduunka. Kordhinta kaliya 1ºC waxay durba haliso u tahay malaayiin dad ah: barafka ku yaal baalayaasha ayaa bilaabay inuu ku dhalaaliyo heer u muuqda mid aan la joojin karin, heerka badda wuxuu u kacayaa si ka dhakhso badan sidii la filayay, iyo abaarosidoo kale duufaannadu way sii xoogeysanayaan.
Dhanka kale, maxaan sameynaa? Waxaan jaray celcelis ahaan 15,3 milyan oo geed sanad walba (oo waxaa jira ilaa saddex triliyan) in laga tago dhul madhan oo laga dhisayo, iyo sidoo kale waxaan wasakhaynaa badaha iyo wabiyada, iyo waliba hawada aan neefsano. Haddii ay tani sii socoto, mustaqbalka inna sugaya ma noqon doono wax rajo leh, sidaa darteed cilmi-baarayaashu waxay dejiyeen yoolal taxane ah oo ay tahay inaan gaarno sannadka 2020, sida kordhinta tamarta la cusboonaysiin karo oo ah 30% isticmaalka korantada, iyagoo hubinaya in ka dhig 15% baabuurta cusub koronto, isla markaana yaree qiiqa saafiga ah ee ka soo baxa jarista dhirta.
Hadaad rabto inaad waxbadan ogaato riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Waxaa inoo harsan 3 sano si aan uga fogaanno aafada cimilada